Iindaba - i-LSR ulwelo lwesicelo sokubumba
Ulwelo lwesilica gel lufinyezwe njenge-LSR, eyimveliso enokuthandwa ngabathengi kunye nabavelisi. I-gel ye-silica eyelwelo yenziwe ngeemveliso zejeli yesilika. Inokuqina okuhle, ukungangenwa ngamanzi kunye nokufuma, kwaye iyamelana neasidi, ialkali kunye nezinye izinto zemichiza. Ngokubanzi isetyenziselwa ukubuyisela iimveliso zeplastikhi zemihla ngemihla.
Ubuchwephesha be-silicone ye-rubber yokubumba iteknoloji (LIM) yindlela entsha yokubumba i-rubber engabonakaliyo eyenziwa ekupheleni kweminyaka yama-1970. Idibanisa intsebenzo egqwesileyo yerabha yentsimbi kunye nezixhobo ezinokuthi zichaneke ngokuchanekileyo nangokuzinzileyo. Uhlobo olutsha lwe-silicone yokubumba kunye ne-teknoloji yokucubungula ifuna izinto ezimbini kuphela (ezinokubandakanya izinto ezincedisayo ezifana nokuhambelana kombala) kwizixhobo, kunye nenkqubo yokutya, ukulinganisa, ukuxuba ukubumba ngokuzenzekelayo. Obu buchwephesha bokusebenza bunokufezekisa injongo yokwenza lula inkqubo, ukunciphisa ixesha lokulungisa, ukugcina izinto kunye nokuphucula ukusebenza. Kwaye akukho nto inkunkuma kwinkqubo yemveliso, eluncedo kukhuseleko lwendalo.
Yonke inkqubo yokubumba yenaliti yahlulwe yangamacandelo alandelayo:
Iyunithi yokuqala yiyunithi yokulinganisa kunye nokondla, Elinganisa ngokuchanekileyo izinto ezimbini zerabha engamanzi engamanzi ngokuthe ngqo ukusuka kumgqomo wokupakisha ukuya kwinkqubo ngokusebenzisa ipleyiti yoxinzelelo lwamanzi;
Iyunithi yesibini iyunithi yokuxuba. Amacandelo amabini angena kwinkqubo axutywe ngokupheleleyo ngokufanayo ngomxube wokuma, kwaye akukho maqamza angeniswayo kwinkqubo;
Iyunithi yesithathu iyunithi yokubumba inaliti. Izinto ezixubileyo zerabha zerabha zithengiswa kubungakanani ngenxalenye yenaliti ngeyunithi yenaliti, kwaye ngokulinganayo isasazwa kwisisu ngasinye, emva koko zenziwe zangcoliswa. Yonke le nkqubo izenzekele ngokupheleleyo, kwaye akukho lawulo lesandla linokufezekiswa emva kokumisela iiparameter zokuphucula ukusebenza kwemveliso.
Izinto ezithintelayo ekusebenzeni kwemveliso ye-LSR
I-LSR inezibonelelo ezininzi, kufanele ukuba ibe nethemba elibanzi kakhulu kwintengiso. Kodwa ngokubhekisele kwitekhnoloji yomenzi wangoku, i-LSR ayinabungane kangako, ebhalwe kuthintelo lwentsebenzo yemveliso. Malunga nokusebenza kwemveliso, ungabhekisa kweli nani lilandelayo. Eli candelo liqulethe i-catalyst kwaye icandelo B linento yokwenza nokunxibelelana. Emva kokuxutywa ngo-1: 1, itofwe kwisikhunta ngesikrufu esikhethekileyo kwaye senziwe i-elastomer kubushushu obuphezulu, emva koko yanyangeka ekubumbeni. ukuyila.
Eyona miqobo iphambili ekujongenwe nayo ngoku ibandakanya:
1. Isantya sokuphilisa umbandela ngokwawo yi-5-8S / mm, ethintela umda kwimveliso yokubumba ngenaliti ngesantya esikhawulezayo.
2. I-silicone engamanzi ine-fluidity ephezulu ngaphambi kokuphilisa, kwaye kulula ukuvelisa i-flash ngexesha lenkqubo yokubumba yenaliti, efuna iimfuno eziphezulu ekuqhubekekeni kokuchaneka komngundo kunye nokuchaneka komatshini wokubumba wenaliti.
3. Iimveliso ze-silicone ezingamanzi zithambile, kwaye imveliso iya kwanda ngevolumu ngexesha lokunyanga, kwaye inciphise umthamo emva kokupholisa, nto leyo ebangela ubunzima obukhulu ekubekweni kwemveliso ngexesha lokuvelisa okuzenzekelayo.